သင်၏အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားစေရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် YouTube ဗီဒီယို ၁၀ မျိုး | Martech Zone
သင်၏အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားစေရန်ကူညီမည့် YouTube ဗီဒီယို ၁၀ မျိုး
သောကြာနေ့, မတ်လ 12, 2021 သောကြာနေ့, မတ်လ 12, 2021 အက်ရှလေမာဖီ
YouTube ၌ကြောင်ဗီဒီယိုများနှင့်ကျရှုံးမှုများစုဆောင်းခြင်းထက်ပိုများသည်။ တကယ်တော့အများကြီးပိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုဆိုရင်အမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်တိုးမြှင့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရောင်းအားကိုမြှင့်တင်ဖို့၊ YouTube ဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုရေးရမယ်၊ ဘယ်လိုရိုက်ကူးမယ်၊ ၂၁ ရာစုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစွမ်းရည်.
အမြင်များကိုအရောင်းသို့ပြောင်းလဲစေသောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်သင့်တွင်ကြီးမားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းနှင့်ကုန်သွယ်မှု၏အနည်းငယ်သောလှည့်ကွက်များဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Headway Capital ၏လမ်းညွှန်နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဘက်ကမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုသင်လေ့လာနိုင်သည် စီးပွားရေးအသေးစားတိုင်းရှိသင့်သည့် YouTube ဗီဒီယို ၁၀ ခု။
သင်၏စီးပွားရေးအတွက် YouTube ဗီဒီယိုများအဘယ်ကြောင့်လုပ်ရမည်နည်း။
YouTube ၏စွမ်းအားကိုလေးစားသောကုမ္ပဏီများသည်အင်တာနက်သုံးစွဲသူသုံးပုံတစ်ပုံကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ထုတ်နေကြသည်။ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရလူပေါင်း ၂ ဘီလီယံကျော်သည် YouTube သို့လစဉ်လစဉ်လာရောက်ကြပြီးအသုံးပြုသူသိသိသာသာများပြားသည်။ နေ့စဉ်ဝင်ရောက်သည်။ ထို့အပြင်ဂူဂဲလ်ပြီးလျှင် YouTube သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေသောအခါအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်နေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားသော YouTube ဗီဒီယိုသည်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူစာရင်းနှင့်ရောင်းအားကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်။ Headway Capital မှသုတေသနပြုချက်အရလူ ၇၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်သရုပ်ပြခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီးနောက်ကုန်ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ယူရန်ပိုများသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ထုတ်ကုန်ဗွီဒီယိုများသည် ၀ ယ်ယူရန်အခွင့်အလမ်း ၁၅၀% နီးပါးမြှင့်တင်ပေးသည်။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် YouTube ၏မည်သည့်ဗီဒီယိုအမျိုးအစားဖြစ်သင့်သနည်း။
ဘာကြောင့် YouTube ဗီဒီယိုတွေလုပ်ရလဲဆိုတာမင်းသိတယ်။ ဒီတော့အခုဘယ်လိုဗီဒီယိုမျိုးရိုက်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်။
How-To ဗီဒီယိုများသည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မီးမောင်းထိုးပြတဲ့ဗွီဒီယိုလိုပဲ ဘယ်လို ပါဝင်မှုသည်သုံးစွဲသူများအားထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ခွင့်ပြုသည်၊ ၎င်းသည် ၄ ​​င်းသည်ကြော်ငြာထားသောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်သည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချစေသည်။ သူတို့သည်သင်၏ဖောက်သည်များ၏အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုကိုယ်စားပြုပြီးသင်၏စီးပွားရေးတွင်ပွတ်တိုက်အားကိုလျော့နည်းစေသည်။ ၅ မိနစ်သရုပ်ပြဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူးခြင်းသည်ဖောက်သည်များထံမှဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်များဖြေဆိုရန် ၀ န်ထမ်းငါးယောက်အားငှားရမ်းခြင်းထက်အကုန်အကျသက်သာသည်။
ထောက်ခံစာဗီဒီယိုများသည်သင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသသောတကယ့်လူ (သို့) သြဇာသက်ရောက်သူများကိုပြသည်။ ဤကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများသည်စစ်မှန်မှုနှင့်ယုံကြည်မှုကိုရရှိစေသည်။ လူများသည်သူတို့၏ရွယ်တူချင်းများသို့မဟုတ်သူတို့၏တန်ဖိုးများသို့မဟုတ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရွေးချယ်မှုများကိုမျှဝေသူတစ် ဦး ဦး ၏အကြံပြုချက်အပေါ် မူတည်၍ ကုန်ပစ္စည်းကိုပိုမိုဝယ်ယူရန်ပိုများသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ unboxing နှင့်စျေးဝယ်တစီးကိုဗီဒီယိုများရှိပါတယ်။ ဤဗီဒီယိုများသည် ၀ ယ်ယူမှုအသစ်နှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းသဘောကိုပုံတူပွားသည်။
ကောင်းသောကြော်ငြာအလုပ်အမှုဆောင် (သို့မဟုတ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနိုင်ငံရေးသမားများ) ကသင့်အားပြောလိမ့်မည်ဟုဆိုသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည်ကျွန်ုပ်တို့ထင်ချင်သည်ထက်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်မတူပါ အဲဒီအစားကျနော်တို့လေ့ရှိပါတယ် စိတ်ခံစားမှုအပေါ်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ချက်များချပါ မဟုတ်ဘဲအအေးခက်အချက်အလက်များထက်။ အကယ်လို့ပရိသတ်ရဲ့ခံစားချက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုသင်ပေးတဲ့ဖောက်သည်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မယ်။
ရလဒ်များကိုမောင်းနှင်သည့် YouTube အကြောင်းအရာကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း?
သင်လိုအပ်မည့်ပထမ ဦး ဆုံးအရာအချို့သည် ကိရိယာအစုံ။ ဒါပေမယ့်ဘဏ်ကိုဈေးကြီးကြီးနဲ့ချိုးဖဲ့စရာမလိုဘူး အလင်းရောင်စင်။ အအောင်မြင်ဆုံး YouTubers အချို့သည်ကောင်းမွန်သောစမတ်ဖုန်းနှင့်တည်းဖြတ်ရေးဆော့ဖ်ဝဲများဖြင့်အပတ်တိုင်းသန်းပေါင်းများစွာသောအမြင်များကိုဆွဲဆောင်သည်။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောဗွီဒီယိုများအတွက်၊ သင်၏အကြောင်းအရာကို ရိုက်ကူး၍ ထုတ်လုပ်မည့်အလွတ်တန်းဖန်တီးသူများနှင့်ဒီဂျစ်တယ်အေဂျင်စီများများစွာရှိသည်။
သင်လည်းလိုအပ်သည် ဇာတ်ညွှန်း။ ၎င်းသည်အကြောင်းအရာအမျိုးအစားတစ်ခုခု၏အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Script တစ်ခုတည်ဆောက်ပုံ၊ ကြည့်ရှုသူကိုခရီးတစ်လျှောက်၊ လမ်းတစ်လျှောက်သူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုနှိုးဆွပြီး ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့လည်ပတ်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ ယ်ခြင်းကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဆီသို့လမ်းညွှန်ပေးသည်။
Scripts တွေဟာရှုပ်ထွေးစရာမလိုပါဘူး။ အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်သုံးခုကိုသာအာရုံစိုက်ပါ။ setting, ပconflictိပက္ခ, ဒါမှမဟုတ် resolution ကို။ တစ်နည်းပြောရရင်သင်ကအစ၊ အလယ်၊ အဆုံးလိုတယ်။
Guy သည်တောအုပ်ထဲ (စက်ဘီးစီး) သွားသည်။ ထို့နောက်သူသည်ပြားချပ်ချပ်တစ်လုံးရပြီးသစ်တောတွင်ရှိနေသည် (ပconflictိပက္ခ)၊ ထို့နောက်သူသည်စက်ဘီးစုပ်စက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်၊ တာယာကိုဖွတ်။ နေဝင်ချိန်သို့ပျော်ရွှင်စွာစီးသွားသည် (resolution) ) ။ စက်ဘီးပေါ်ကလူက ဦး ဆောင်သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ပြဇာတ်ရဲ့တကယ့်ကြယ်ပွင့်ကစက်ဘီးစုပ်စက်ပါ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြည့်သည့် YouTube ဗီဒီယိုများပြုလုပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အကြံပေးချက်များရှိပါသည်။
Tags: နောက်ကွယ်မှဗီဒီယိုများနောက်ကွယ်မှအမှတ်တံဆိပ်ဗီဒီယိုများအီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးဗီဒီယိုများမြို့တော်သြဇာသက်ရောက်သောဗီဒီယိုများinfographicအဖွဲ့ဗီဒီယိုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ဗီဒီယိုများထုတ်ကုန်မီးမောင်းထိုးဗီဒီယိုများစုဆောင်းရေးဗီဒီယိုများHaul ဗီဒီယိုများစျေးဝယ်အသေးစားစီးပွားရေးဗီဒီယိုများsmbကွက်ကိုထောက်ခံစာဗီဒီယိုများYouTube ဗွီဒီယိုအမျိုးအစားများဗီဒီယိုများ unboxingဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုမှလုပ်ဆောင်ချက်ဗွီဒီယိုထိတွေ့မှုဗွီဒီယိုအလင်းရောင်ဗီဒီယိုဇာတ်ညွှန်းဗီဒီယိုဗီဒီယိုအကြံပြုချက်များစကားသံyoutube သတင်းအချက်အလက်youtube မက်ထရစ်youtube ပုံသေးyoutube ကဗီဒီယိုYouTube ဗွီဒီယိုဇာတ်ညွှန်းYouTube ဗီဒီယိုYouTube အသံလွှင့်ဌာန
အက်ရှလေမာဖီသည်မန်ချက်စတာတက္ကသိုလ်မှအင်္ဂလိပ်စာပေနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဖြင့် BA (Hons) ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အလွတ်အကြောင်းအရာရေးသားသူအဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်နည်းပညာ၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေး၊ ကြော်ငြာမိတ္တူ၊ မျက်မှောက်ရေးရာနှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုကိုအထူးပြုသည်။
အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆလိုက်ရှိုးပြုလုပ်သည့်အပလီကေးရှင်းများ (Desktop ဆော့ဝဲလ်၊ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများ)
Data Hygiene - Data Merge Purge ကိုမြန်မြန်လမ်းညွှန်